Shina Malezia- Serivisy sy Fitsapana SIRIM |MCM
Ho fiarovana ny olona sy ny fananana, ny governemanta Malaysia dia mametraka rafitra fanamarinana vokatra ary mametraka fanaraha-maso amin'ny fitaovana elektronika, fampahalalana & multimedia ary fitaovana fanorenana.Ny vokatra voafehy dia azo aondrana any Malezia raha tsy aorian'ny fahazoana taratasy fanamarinana sy fametahana ny vokatra.
SIRIM QAS, sampana iray manontolo ao amin'ny Malaysian Institute of Industry Standards, no hany vondrona fanamarinana voatondro ho an'ny masoivoho nasionaly mifehy ny Malaysia (KDPNHEP, SKMM, sns.).
Ny fanamarinana bateria faharoa dia notendren'ny KDPNHEP (Minisitry ny Varotra anatiny sy ny mpanjifa Maleziana) ho tompon'andraikitra tokana.Amin'izao fotoana izao, ny mpanamboatra, ny mpanafatra ary ny mpivarotra dia afaka mangataka mari-pankasitrahana amin'ny SIRIM QAS ary mangataka amin'ny fitsapana sy fanamarinana ny bateria faharoa amin'ny alàlan'ny fomba fanamarinana nahazoana alalana.
▍SIRIM Certification- Batterie faharoa
Ny bateria faharoa dia iharan'ny fanamarinana an-tsitrapo amin'izao fotoana izao fa ho ao anatin'ny sehatry ny fanamarinana tsy maintsy atao tsy ho ela.Ny daty tsy maintsy atao dia miankina amin'ny ora ofisialy ofisialy Maleziana.SIRIM QAS dia efa nanomboka nanaiky ny fangatahana fanamarinana.
Fanamarinana bateria faharoa: MS IEC 62133:2017 na IEC 62133:2012
●Nanangana fantsona fifanakalozam-baovao sy ara-teknika tsara miaraka amin'ny SIRIM QAS izay nanendry manam-pahaizana manokana hikarakara ny tetikasa MCM sy ny fanontaniana ihany ary hizara ny vaovao farany amin'ity sehatra ity.
● SIRIM QAS dia manaiky ny angona fitiliana MCM mba ho azo andrana amin'ny MCM ny santionany fa tsy alefa any Malezia.
● Manome serivisy tokana ho an'ny fanamarinana Maleziana momba ny bateria, ny adaptatera ary ny finday.
teo aloha: Vietnam - MIC
Manaraka: Inona no atao hoe fanamarinana AIS any India?Tsy maintsy atao ve ny fanamarinana AIS?
Malezia Sirim Certificate
Malezia Sirim Certification Price
Maleziana Sirim Certification Procedure
Serivisy fanamarinana Malaysia Sirim
Malezia Sirim Lead Time
Malaysia Sirim Report
Documents Teknika Sirim Malaysia
Malezia Sirim Test Items
Fomba fitsapana Sirim Malaysia
Malaysia Sirim Test Report
Malezia Sirim Testing Price
Serivisy fitiliana Sirim Malaysia
Fotoam-panadinana Sirim Malezia
Malezia Sirim Tr